ဟနျဂရေီကို (၄-၀)ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ အင်ျဂလနျအသငျးတိုကျစဈကစားသမားစတာလငျဟာ ဂိုးသှငျးအပွီးမှာ မကွာသေးခငျက ကှယျလှနျသှားတဲ့ သူ့ရဲ့အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈသူ စတကျဖီဂရကျဂျကို ရညျညှနျးပွီးတော့ အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။
အသကျ(၂၆)နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ စတကျဖီဂရကျဟာ ဂမြကောနိုငျငံမှာ နာမညျကွီးအဆိုတျောအဖွဈသာမက တေးထုတျလုပျရေးလုပျငနျးရှငျအဖွဈလုပျကိုငျနတေဲ့ Rvssian ရဲ့တူမတျောစပျပွီး အခုတဈပတျအစောပိုငျးကမှ ရုတျတရကျကှယျလှနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စတကျဖီဂရကျဂျဟာ နာမညျကြျောကွားတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျအမြိုးသမီးတဈဦးဖွဈသလို ဂမြကောနိုငျငံမှာ လူသိမြားထငျရှားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး ဖခငျဖွဈတဲ့ ဂယျရီဂရကျဂျက တဈခြိနျက နာမညျကြျောပွိုငျကားမောငျးသမားတဈဦးဖွဈတဲ့အပွငျ
အဈကိုဖွဈတဲ့ကိုငျးလျဂရကျဂျဟာလညျး အခုလကျရှိအခြိနျမှာ ဖခငျခွရောကို လိုကျနငျးပွီးတော့ နာမညျကြျောပွိုငျကားမောငျးသမားအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။
စတကျဖီဂရကျဂျဟာ ကိုဗဈရောဂါဆိုးကူးစကျခံစားခဲ့ရပွီးနောကျပိုငျး Lupas လို့ချေါတဲ့ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကိုယျခံအားက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှာရှိတဲ့ တခွားအစိတျအပိုငျးတှနေဲ့တဈသြှူးတှကေို တိုကျခိုကျတဲ့ရောဂါရရှိခဲ့ပွီး သွဂုတျလ(၃၁)ရကျမှာ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
စတာလငျနဲ့စတကျဖီဂရကျဂျတို့ဟာ ငယျငယျကတညျးက ရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈပွီး မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ပှဲတခြို့မှာ စတာလငျနာမညျပါတဲ့ဂြာစီဝတျဆငျပွီးတော့ အားပေးလရှေိ့ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ စတာလငျဟာ သူငယျခငျြးကောငျးတဈဦးဖွဈသူ စတကျဖီဂရကျဂျအတှကျ အမှတျတရဖွဈအောငျ ဟနျဂရေီနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးအပွီး ‘Love you forever Steffie Gregg’လို့စာသားရေးထားတဲ့ အောကျခံအင်ျကြီနဲ့ အောငျပှဲခံခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒ့ါအပွငျ ပှဲအပွီးမှာလညျး စတငျလငျက သူအောငျပှဲခံနတေဲ့ဓာတျပုံတခြို့ကို Twitter မှာ Post တငျခဲ့ပွီး အသညျးနှလုံးပုံစံ emoji၊ ဆုတောငျးနတေဲ့ emoji တို့နဲ့အတူ “This one was for you SVG.”(ဒီဂိုးက နငျ့အတှကျရညျညှနျးပါတယျ . .စတကျဖီဂရကျဂျရေ)လို့ Caption ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ကွန်လွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူစတက်ဖီဂရက်ဂ်ကို ရည်ညွှန်းပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့စတာလင်
ဟန်ဂေရီကို (၄-၀)ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းတိုက်စစ်ကစားသမားစတာလင်ဟာ ဂိုးသွင်းအပြီးမှာ မကြာသေးခင်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စတက်ဖီဂရက်ဂ်ကို ရည်ညွှန်းပြီးတော့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ စတက်ဖီဂရက်ဟာ ဂျမေကာနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖြစ်သာမက တေးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Rvssian ရဲ့တူမတော်စပ်ပြီး အခုတစ်ပတ်အစောပိုင်းကမှ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စတက်ဖီဂရက်ဂ်ဟာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သလို ဂျမေကာနိုင်ငံမှာ လူသိများထင်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီဂရက်ဂ်က တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်ပြိုင်ကားမောင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကိုင်းလ်ဂရက်ဂ်ဟာလည်း အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဖခင်ခြေရာကို လိုက်နင်းပြီးတော့ နာမည်ကျော်ပြိုင်ကားမောင်းသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။
စတက်ဖီဂရက်ဂ်ဟာ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကူးစက်ခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း Lupas လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့တစ်သျှူးတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ရောဂါရရှိခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ(၃၁)ရက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စတာလင်နဲ့စတက်ဖီဂရက်ဂ်တို့ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ပွဲတချို့မှာ စတာလင်နာမည်ပါတဲ့ဂျာစီဝတ်ဆင်ပြီးတော့ အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စတာလင်ဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ စတက်ဖီဂရက်ဂ်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်အောင် ဟန်ဂေရီနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းအပြီး ‘Love you forever Steffie Gregg’လို့စာသားရေးထားတဲ့ အောက်ခံအင်္ကျီနဲ့ အောင်ပွဲခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ပွဲအပြီးမှာလည်း စတင်လင်က သူအောင်ပွဲခံနေတဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ကို Twitter မှာ Post တင်ခဲ့ပြီး အသည်းနှလုံးပုံစံ emoji၊ ဆုတောင်းနေတဲ့ emoji တို့နဲ့အတူ “This one was for you SVG.”(ဒီဂိုးက နင့်အတွက်ရည်ညွှန်းပါတယ် . .စတက်ဖီဂရက်ဂ်ရေ)လို့ Caption ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဟနျဂရေီပရိသတျတှရေဲ့ လူမြိုးရေးခှဲခွားလှောငျပွောငျတာခံခဲ့ရတဲ့ အင်ျဂလနျကစားသမားမြား